4 Sanno guuradii Kasoo Wareegtey Markii La Asaasay Jubbaland. W/Q Cabdinaasir Axmed | RBC Radio
4 Sanno guuradii Kasoo Wareegtey Markii La Asaasay Jubbaland. W/Q Cabdinaasir Axmed
Posted on April 3, 2017 Maqaal, RBC, Wararka
Waxay ahayd himillo fog oo muddo dheer la hiigsanayay in ay Jubbaland dhalato, gaar ahaan dadka aan ka mid ahay ee dhibanaha usoo noqdey nidaamkii dawladdii dhexe ee wax kasta oo adeeg ah laga doonan jirey caasimadda.
Kaliya marka la riyoodo ayaa runtana lagu baraarugaa, Jubbaland waxa ay ahayd riyo rumoowdey.
4 sano kadib asaaskii Jubbaland dhib kasta oo lasoo maray, maanta waxa ay tusaale wanaagsan u tahay dalka intiisa kale, waana astaanta koowaad ee muujineysa in nidaamka federaalka uu guuleysan karo, ka shaqayn karo Soomaaliya, islamarkaasina xal u yahay mashaakilaadka dalka ka jirey.
Maanta waxaa baarlamaanka Soomaaliya ku jira 42 xildhibaan oo ku timid sharciyadda ay ku dhisantahay Jubbaland iyo awoodaha uu dastuurka siiyey maamul goboleedkani, waxaa kale oo Aqalka Sare ku jira 8 xildhibaan oo qaabkaas oo kale ku yimid, iyada oo si toos ah uu usoo xuley tartamayaasha madaxweyne Axmed Maxamed Islaam, kadibna uu baarlamaanka u codeeyey.
Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam waxa uu Soomaalida dhexdeeda ka noqdey shaqsi ku sifoobey midnimada dalka, illaalinta astaamaha qaran sida calanka buluugga ah iyo Afka hooyo, sidoo kale waxa uu boggaadin ku muteystey arrimaha xaldoonka iyo nabadeynta Soomaalida dhexdeeda.
Dadka Jubbaland ka tirsan oo aan aniga ka mid ahay, madaxweynaha koow ka yahay waxa ay fahmeen falsafada ah in adiga oo heer maamul goboleed jooga aad dalka intiisa kalana wax ku tari kartid, in aad illaalin kartid heykalka dawladnimo iyo kala sareynta laamaha dawliga ah.
Laakiin taasi nagama leexineyso in aan dadka Jubbaland oo qabiil kasta leh aan xaqooda raadino, maslaxadoodana aan ka shaqayno.
Cidna ku halayn meyno dahanaha qaranka sida amniga, iyada oo laamaha amniga Jubbaland ay xitaa dawladda federaalka gacan ka siiyaan gudbinta xogaha muhiimka ee la xiriira kooxaha falalka amni daro maleegaya, waxaana dhacday in la fashiliyey tiro badan oo falal argagixiso oo lala maaganaa shacab Soomaaliyeed iyo xarumo dawladeed.
Jubbaland waxa ay wanaajisey xiriirka wadashaqayn ee kala dhaxeeya maamul goboleedyada oo dhan, xitaa kuwa laga yaabo in aan ku kala aragti duwanahay arrimaha siyaasadda, waxaana dhacday in aan xitaa la wadaagnay qeyb ka mid ah kheyraadka Jubbaland sida warbaahinta Jubbaland oo hadda noqotey mid u adeegta shacabka Soomaaliyeed oo dhan meel kasta oo ay joogaan.
Madaxda Jubbaland waxa ay fursad siisey madaxda Federaalka, mana jirin wax farogalin ah oo lagu sameeyey doorashadii madaxweynaha, iyo xulistii Ra’isulwasaaraha iyo golaha wasiirada, markastana waxaan kalsooni ku qabnay in rabitaanka baarlamaanka uu waddo fiican dalka u horseedi karo.
Hadda oo shan sano laga soo wareegey maalintii la mudey calanka astaanta u ah Jubbaland ee xiddigta shanta gees ay ka dhex muuqato , hawsha ugu weyn ee hortaala Jubbaland waa xoreynta deegaanada ku jira gacanta Alshabaab iyo sidii shacabkaasi loo gaarsiin lahaa adeega dawladnimo.
Ugu dambeyntii waxaan shacabka shacabka Jubbaland ku dhaqan ugu bishaareynayaa in maalinta 4ta bisha April, 2017-ka, kuna beegan maalinta talaadada ay madaxda Jubbaland oo madaxweynaha ugu sareeyo aan u wada dabaaldagi doono guushaasi weyn ee asaaska Jubbaland, iyada oo shacabka Soomaaliyeed ee kale ee kasha ka jecel horumar qeyb ka mid ah dalka uu gaaray ay iyaguna farxada nala qeybsan doonaan.
Agaasimaha Warbaahinta Jubbaland